Nzukọ Nnọkọ Njem Ntugharị Mba Na-ahụ Kwa Afọ na-eweta ngalaba ọnụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Nzukọ Nnọkọ Njem Ntugharị Mba Na-ahụ Kwa Afọ na-eweta ngalaba ọnụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
by Onoriode Onoriode George - eTN Nigeria
dere Onoriode Onoriode George - eTN Nigeria
Mbipụta nke mbụ nke National Summit Summit Summit (NTTS) emere n'ọnwa gara aga na International Conference Center (ICC), Abuja, isi obodo Nigeria.
Ihe omume a gara nke ọma dọtara ndị sonyere na mmiri, ụgbọ njem ala, ụgbọ elu, na ụlọ ọrụ ndị njem. O nwekwara ndị sonyere na agụmakwụkwọ ụwa, gọọmentị etiti, parastatals, na steeti.
Nzukọ Nnọta Njem Nleta Transportgbọ njem Mba, nke malitere site na njem obodo n'okporo ámá ụfọdụ a họpụtara ahọpụta nke Abuja, ji njedebe dị egwu mechie.
Ebumnuche nke nzuko a, dị ka Abiodun Odusanwo, Onye isi oche, Institute of Tourism Professionals (ITP) si kwuo, ahụ nke chepụtara ihe omume ahụ, bụ ilekwasị anya na mmekọrịta dị n'etiti njem na njem na-elekwasị anya na akwụkwọ na mkparịta ụka banyere ime ka ụwa mara. echiche na otu Naijiria ga-esi kwụba n'omume zuru ụwa ọnụ.
Grace Isu Gekpe, onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide nke Mịnịstrị nke Ozi, Omenala na njem na-anọchi anya Mịnịsta, Lai Mohammed, Abiodun Odusanwo, Onye isi ala, Institute of Tourism Professional [ITP], onye nhazi National Tourism and Transport Summit na Salem Rabo, Onye isi ala, Federation of Tourism Mmekọrịta nke Nigeria [FTAN] na ebe a ga-eme nzukọ njem njem njem mba na nso nso a na Abuja.
N’ozi nnabata ya n’oge ahụ, Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi, omenaala na njem nlegharị anya, Lai Mohammed, nke onye odeakwụkwọ na-aga n’ihu nke Mịnịstrị ahụ, bụ Grace Isu Gekpe nọchitere anya, toro ndị na-ahazi nzuko ahụ ma nwee nsogbu na njikọ dị n’etiti ndị njem na njem njem. .
Isiokwu maka nnọkọ nnọkọ gụnyere: Njegharị na njem na-eme njem maka inwe mmekọrịta na mmepe mmepe, Marketingzụ ahịa ahịa - ọrụ dị maka ngalaba njem, Iwulite ikike maka usoro kachasị mma n'ụwa na ndị njem na njem, yana usoro ikikere na nlekọta na nzukọ nzukọ ụwa maka mmepe mmepe nke njem na njem.
Odusanwo, onye bụkwa onye isi oche kọmitii na-ahazi, kwuru na, "nke a bụ otu n'ime oge ndị ahụ ebe ndị na-eme ngosi, na anyị nwere ọtụtụ ndị isi ndị isi nke parastatals." anyị nwere ndị isi ndị isi gafee mpaghara site na njem ụgbọ njem, ụgbọelu, njem, na agụmakwụkwọ.
“Maka ha isonye na mbipụta nwata nwanyị a, ọ pụtara otu, ọ na-egosi ọkwa ntụkwasị obi; abụọ, ọ na-egosi mkpa ọ dị inwe njem na njem nleta. Ha ahụwo n'ezie na njikọta nke ekwesịrị ịnọ na ya.
“Ha achọpụtala ugbu a na ọ dị mkpa. Nke ahụ bụ otu n'ime nsonaazụ ọma nke nzukọ ahụ.
“Obi dị anyị ụtọ na Minista nke Ozi, Omenala na njem nlegharị anya, onye onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide, Mịnịsta nke ofgbọ njem, Mịnịsta na-ahụ maka ụgbọelu na-anọchi anya ya, na ndị isi ụlọ ọrụ nke ndị na-eme mkpebi bụ ndị bịara ya bụ ezigbo nsonaazụ. maka nzuko.
“Ihe ọzọ dị mkpa bụ na nzuko a bụ n’ihi mkpebi kansụl na Sokoto na 2017.
“Nke na-esote, ha ga-akọghachite maka ihe mere, na ọtụtụ ndị ga-ekwupụta akụkọ ndị a nọ ebe a. Ọ bụ na nzukọ kansụl na-esote ka a ga-ekwupụta nkwupụta ahụ dịka akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ.
“Anyị ga-apụta na-atụ aro. Ọ bụ aro ndị ahụ ga-eduga n'ọnọdụ ndị ọzọ ndị minista ga-ewere ọnọdụ. ”
N’ikwu okwu na nzuko ahụ, Onye isi ala, Federation of Associations Tourism Associations of Nigeria (FTAN), Saleh Rabo, toro ndị na-ahazi maka mbido na nnukwu ihe ịga nke ọma edere.
O kwuru, sị: “Ọ bụ mmepe dị mma, n’ihi na njem nleta dịka anyị si mara enweghị ike ịme nke ọma na enweghị njem. Anyị enweghị ike iru ebe anyị na-aga. Gbọ njem pụrụ ịbụ ikuku, okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, ma ọ bụ oké osimiri.
Onoriode Onoriode George - eTN Nigeria